Wefdi ka socda dalka Qatar oo yimid Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWefdi ka socda dalka Qatar oo yimid Muqdisho
November 28, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Wefdiga ka socda dowladda Qatar oo yimid Muqdisho. [Sawirka: Radio Muqdisho]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wefdi ka socda dalka Qatar ayaa maanta oo Talaado ah yimid caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay ku warantay idaacada dowladda ee Radio Muqdisho.
Wefidga oo uu hoggaaminayo Khalifa Jassim Al kuwari oo ah agaasimaha guud ee sanduuqa Qatar ee horumarinta ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku soo dhaweeyay masuuliyiin katirsan dowladda Soomaaliya.
Wefdiga Qatar ayaa la kulmi doona Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxayna ka wadahadli doonaan arrimo kala duwan.
July 23, 2019 New York Times cod-taleefoon oo ay heshay oo muujinaya in Qatar ay ka dambayso qarax ka dhacay magaalada Boosaaso
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa ka tanaasulay tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya, sida ay warsidaha Puntland Mirror u xaqiijiyeen ilo-wareedyo. Ma uusan qeexin tanaasulkiisa, balse waxa uu carabka ku adkeeyay [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Kooxo looga shaki qabo burcadbadeed Soomaali ah ayaa Axadii weerar ku qaaday markab shidaal waday oo ku gooshayay calanka Britain biyaha Gacanka Cadmeed oo u dhaxeeya Yemen iyo Soomaaliya. Labo doonyood oo xawaare [...]
Ugu yaraan sideed qof oo lagu dilay kadib weerar ay Al-Shabaab ku qaaday huteel kuyaala Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan sideed qof ayaa lagu dilay gudaha Muqdisho caawa oo Arbaco ah kadib markii gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa lagu qarxiyay huteel, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka iyo caafimaad. Weerarka [...]